Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBarbados Breaking » Iinqwelomoya ezintsha ezivela eAmsterdam ukuya eBarbados
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Oktobha 14, 2021
Iinqwelomoya ezintsha ezivela eAmsterdam ukuya eBarbados.
I-KLM Royal Dutch Airlines yayiyinqwelomoya yokuqala yorhwebo ukufika kwisikhululo senqwelomoya saseSeawell eBarbados ngo-Okthobha 19, 1938.
Inqwelomoya yokuqala ye-KLM Royal Dutch Airlines, ecwangciselwe u-Okthobha 16, 2021 sele ithengisiwe.
UMphathiswa wezoKhenketho noThutho lwaMazwe ngaMazwe, uSenethi oHloniphekileyo. U-Lisa Cummins uchaze inkonzo entsha ye-KLM njengeyona nto iphambili kukhenketho lweBarbados.
Inkonzo entsha ye-KLM iya kubonelela ngokufikelela okukhulu kunye nokunxibelelana okungagungqiyo ukuya nokubuya kumazwe amakhulu aseYurophu nakwimimandla enjengeNetherlands, iBelgium, iFrance ne-Scandinavia, nge-Amsterdam Airport Schiphol eNetherlands.
Isango elitsha laseYurophu sele libonisa isithembiso seBarbados njengoko iGreyley Adams International Airport (BGI) ilungiselela ukufumana inkonzo entsha ngqo esuka eAmsterdam Airport Schiphol (AMS) ngeKLM Royal Dutch Airlines.
Kwiinyanga emva kokubhengezwa kwenkonzo entsha, inqwelomoya yokuqala, eyayicwangciselwe u-Okthobha 16, 2021 sele ithengisiwe. Ukongeza kwimpendulo ebalaseleyo, iya kuba ngumzuzu wembali kwilizwe njengoko Inkampani ye-KLM Royal Dutchs yayiyinqwelomoya yokuqala yorhwebo ukufika kwisikhululo senqwelomoya iSeawell Barbados ngo-Okthobha 19, 1938. Ngoku, kwiminyaka engama-83 kamva, isenza imbali kwakhona ngenqwelo moya ethengisiweyo esuka eAmsterdam isiya eBarbados.
UMphathiswa wezoKhenketho noThutho lwaMazwe ngaMazwe, uSenethi oHloniphekileyo. U-Lisa Cummins uyichaze njengeyona nto iphambili kukhenketho lwelizwe. “Sijonge phambili ekwamkeleni iKLM kwakhona, emva kwamashumi amabini eminyaka, kunxweme lwethu. Njengoko sijonga imeko yeshishini lokhenketho lwehlabathi, into yokuba phakathi kwalo bhubhane, amaqabane ethu ayaqhubeka nokubonisa ukuzithemba Barbados uphawu, kunye KLM ukongeza malunga nezihlalo ezingama-20,000 XNUMX ukusuka eYurophu ukuya eBarbados kwisithuba seenyanga ezintlanu, kuyavuyisa. Okubaluleke nangakumbi, kubonisa umsebenzi owenziwe liqela lezokhenketho elisebenzela iBarbados njengoko sibonisa ukuvalwa kweentengiselwano ngeenqwelo moya ezintsha nezandisiweyo kwaye siqhubeka nokubuyisela icandelo lethu ebomini kwezi meko zingaqhelekanga. ”
"Ndifuna ukuncoma iinzame zeqela liphela, ngakumbi amaqela ethu apha ekhaya kwi-Ofisi yoMphathiswa, i-GAIA, kunye neemarike zethu zaphesheya kolwandle kule meko, ngakumbi iqela laseYurophu, elisebenze ngokungakhathali ukwenza oku kube yinyani," uthe.
Njengenye yeenqwelo-moya ezinde ezisebenza emhlabeni, zisebenza phantsi kwegama lazo eliyiminyaka eli-100, KLM sesona sithuthi sithatha ixesha elide sivela eYurophu, sisebenza iindawo ezingama-318 kumazwe ali-118 anamaqabane angama-80 abelana ngeekhowudi. Inkonzo entsha ye-KLM iya kubonelela ngokufikelela okukhulu kunye nokunxibelelana okungagungqiyo ukuya nokubuya kumazwe amakhulu aseYurophu nakwimimandla enjengeNetherlands, iBelgium, iFrance ne-Scandinavia, nge-Amsterdam Airport Schiphol eNetherlands.
UCummins wongeze wathi: "Olu phuhliso luza kuyiphucula imizamo yeBarbados yokuphinda iseke iYurophu kwaye ndiyazingca ngokuba iBarbados inokuziqhayisa ngobuhlakani bobabini ne-KLM neLufthansa, iziphathamandla ezibini zaseYurophu, njengoko sisondela ebusika 2021/2022. Sizimisele ukugcina lo mnqamlezo uhamba lonke ixesha lonyaka.
"Ewe kunjalo, sikwalindele ukuba uninzi lweBarbadians kunye nabantu baseCaribbean banqwenela ukusebenzisa olu nxibelelwano lusebenzayo kunye neYurophu ukusuka eBarbados kwaye sinethemba lokuba ngenkani, iinqwelomoya ziya kuthathela ingqalelo ukwandisa ixesha lonyaka," utshilo. Into esisebenza nayo namaqabane ethu kukulinganisa ukhenketho lwethu lokukhwela abakhweli nge-ajenda yethu yorhwebo ukubonelela ngokuhanjiswa kwemithwalo kwimpahla ingakumbi izinto ezinokonakala. Oku kubalulekile njengenxalenye yezothutho lwezothutho lwamanye amazwe kunye nesitshixo sokwanda koqoqosho lwethu kwiimarike ezintsha sisebenzisa ubudlelwane beenqwelo moya.
Iinqwelomoya ziya kusebenza zingayeki ukusuka eAmsterdam ukuya Barbados, Iintsuku ezintathu ngeveki ngoMvulo, uLwesine nangoMgqibelo kwizithuthi zanamhlanje, ezisebenza kakuhle zeAirbus A330-200 enezihlalo ezingama-264 kwiiklasi ezintathu kubandakanya neshishini. Ukusuka eAmsterdam nge-12: 25 pm CET kwaye ufike kwi-BGI 4: 45 pm AST, inkonzo iya kuqhuba kude kube nguMatshi 31st, 2022.